बैंकिङ मर्जर : हल्ला भएअनुसार छैन तीव्र तयारी, के छ हालको मर्जर अवस्था ? ~ Banking Khabar
बैंकिङ मर्जर : हल्ला भएअनुसार छैन तीव्र तयारी, के छ हालको मर्जर अवस्था ?
बैंकिङ खबर/ बैंकिङ क्षेत्रमा विग मर्जरको कुराले बहस पाइरहेका बेला केही बैंकवित्त भने मर्जरमा नजाने गरी अघि बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो समय जनता बैंक र ग्लोवल आइएमई बैंक मर्जर भएपछि ठुला बैंकहरुको साखमा प्रश्न उठेपछि मर्जरको रस्साकस्सी नै चलेको हो । केही वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द चर्चा र जनचासोको केन्द्रमा छन् । शाखासञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामर्थ्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भईकन पनि सामर्थ्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिएको छ । यी दुई प्रक्रियामार्फत नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिअनुरूप ढिलो–चाँडो बैंकहरूले यो प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नु नै छ । बैंकहरूले स्वयम् निर्णय लिन नसकेमा नियामक निकायले नै ‘फोर्स मर्जर’ गराउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले साना तथा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसन बाध्यात्मक बनाएको छ । यो बाध्यताको फाइदा उठाउँदै ठूला बैंकले सानालाई भरसक कम मूल्यमा एक्वाएर गर्न खोज्ने, एउटा संस्थासितको छलफलको निष्कर्ष ननिस्किँदै अन्य संस्थासित छालफल बढाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।अर्कोतर्फ ठूला तथा मजबुत व्यापार भएका बैंकहरू भने आफ्नो साख जोगाउने चुनौतीसित जुधिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो साबिकको ताज जोगाउन अन्य वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न चाहन्छन् । साना बैंक सम्मानजनक मर्जर/एक्विजसनका लागि हात बढाइरहेका छन् भने ठूलाको ध्यानसाना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्नुमा छ ।